Ianaro ny fomba hamoronana doka famoronana mahomby izay miasa | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | Graphic Design, Inspiration
Mianara mamorona doka mahomby azoko mahafeno ny tanjontsika amin'ny fomba mahomby nefa tsy lasa adala loatra. Amin'ny fampiasana ny brainstorming hivoatra isika sarintany ny zavatra tadiavinay maneho saryRaha tsy mahomby io ampahany io, dia ho toy izany koa ny sary.
Ny doka dia misy a fifandraisana amin'ny foto-kevitra ary ny hevitra amin'ny alàlan'ny fifandraisana, toa ny tetika hanombohantsika mamorona a fanapahana votoaty ary avy eo mitady fifandraisana sy ny fomba hitondrana zavatra mafy orina amin'ny alàlan'ny famolavolana sary. Amin'ity ohatra ity dia hamorona kely isika sary momba ny dokam-barotra ho an'ny orinasam-pamokarana sy mpitantana ny atiny Netflix.
Ny hany ilaintsika hanombohana ny fizotran'ny atidoha dia ny libreta na solaitrabe, na aiza na aiza no ahafahantsika manoratra am-pitoniana. Raha mampiasa ianao loko maro tsara indrindra.
1 Voalohany dia tsy maintsy fantatsika ny tanjontsika mba hamakafaka:
2 Mba hamoronana ilay grafika, dia nanao teny fanalahidy kely mifandraika amin'ireo fotokevitra hitantsika teo aloha izahay.
Tokony ho fantatsika aloha ny momba antsika zavatra hamakafaka:
Eritrereto amin'ny marika na vokatra tianay hamakafaka
Raha vantany vao azontsika io ampahany io dia hanontany tena isika Tanjona.
Inona no tadiaviko mahazo miaraka amin'ity sary ity?
Izay soatoavina o toetra Te-hamaritra aho?
OMS hahita ny sariko?
Raha vantany vao azontsika io dia hiroso amin'ny ampahany lehibe isika: Diniho ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny kely fianarana an-tsaha. Ny zavatra tsara amin'ny fanaovana an'ity fandalinana kely ity aorian'ny nanontaniantsika ny tenantsika ny fisalasalana teo aloha dia ny fahitantsika izao fahitana mifantoka amin'ny hoe iza isika ary inona no tadiavintsika.
Mira marika mitovy amin'izany ho anao
Ahoana no ahafahanao amidy?
Mampiasa a fiteny sary matanjaka sa zavatra misoko mangina kokoa?
tanjona ohatra izay tianao harahina.
Raha jerentsika akaiky io kisary an'ny McDonald tsikaritray fa cka tsy misy atiny sary, amin'ity tranga ity dia nisafidy ny hamorona sary madio kokoa izy ireo nomanina tsara. Amin'ity sary ity dia nampiasain'izy ireo ny sary famantarana ny marika psinga sary lehibe, namerina ny sary famantarana tamin'ny haavony hatramin'ny ambany ka hatramin'ny ambany maneho ny hevitry ny fianakaviana (olon-dehibe sy ankizy, ray aman-dreny sy zanaka) miaraka daholo izany rehetra izany dia mahavita mamorona ilay feo avoakantsika rehefa mahita sakafo tiantsika isika: mmm, misy io feo io fifandraisana tsara izay mifandray mivantana amin'ny sehatry ny marika, amin'ity tranga ity dia sakafo haingana. Loko orinasa, endrika am-pitandremana ary zavatra hafa tsotra nefa mahasarika maso.
Ankehitriny dia hanomboka ny fizotran'ny atidoha amin'ny marika isika Netflix.
Mahatonga izany Netflix? manolotra atiny nomerika amin'ny sarimihetsika sy andiany (audiovisual).
Miaraka amin'ny sary izay hoforoninay dia mitady hisolo tena ny hevitra ny fahotana de Netflix, tsara ny atin'ny atiny ka handao antsika izy ireo voafatotra amin'ny seza Andro sy alina tontolo). Araka ny fantantsika Netflix rehefa misy vanim-potoana vaovao mivoaka izay ataony dia ny mampakatra ny toko rehetra miaraka, zavatra iray tadiavintsika taratra izany ao amin'ny sary. Ny grafika dia natao ho an'ny a pubic tanora, ireo tia horonantsary sy andian-dahatsoratra izay afaka mandany alina mandinika andiany iray tsy manakimpy maso.
Brainstorming: mikendry izahay hevitra izay mifandraika amin'ny marika anay.
Miaraka amin'ireo hevitra ireo dia manomboka mamorona sivana mitazona ny sasany hevitra mafy orina, hofidintsika ireo hevitra izay mifanaraka indrindra amin'ny tanjontsika.
Nijanona niaraka taminay izahay hevi-dehibe telo hisolo tena ny sary vaovao. Amin'ity tranga ity dia hisolo tena ny hevitry ny alin'ny Netflix tsy matory.
Alohan'ny hanombohana ny fiasa amin'ny fizotran'ny sary dia tokony jereo ny kisary samihafa dokam-barotra amin'ny marika hahafantarana kely hoe inona ilay tsipika famolavolana iza no mampiasa Netflix.
Mba hamoronana ilay grafika dia nanao kely izahay fanaparitahana teny lakile mifandraika amin'ireo foto-kevitra hitantsika teo aloha.
Teny lakile: vice, marathon, insomnia.
ireo teny lakile adika amin'ny sary Izy ireo dia mety: maso, havizanana, kafe + sofa, hodi-maso, tranolay + sofa. Izy ireo dia sary vitsivitsy izay mety mifandray tanteraka amin'ny hevitsika. Ao amin'ity faritra ity no tokony hilazantsika mazava tsara hoe iza amin'ireo mpihaino no kendrenao, raha ity dia sary somary maizina io satria mpihaino sehatra tanora kokoa io.
Raha liana amin'ireo lohahevitra ireo ianao ary mila izany andao hiditra lalindalina kokoa kely kokoa ianao dia afaka mamela hevitra ary hanao bebe kokoa izahay Lahatsoratra momba ireo lohahevitra ireo miaraka amina tranga tena azo ampiharina sy horonan-tsary vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ianaro ny fomba hamoronana doka famoronana mahomby izay miasa
Esters dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Tena nahaliana ahy izany ary, mazava ho azy, tena nanampy be izany.
Tiako ny hanaovanao lahatsoratra bebe kokoa manitatra an'ity lohahevitra ity!
Diego Navarrete dia hoy izy:
Tsara, nila izany aho, misaotra.
Mamaly an'i diego navarrete
N5 Burger Garage. Mihinana ny hamburger anao ao amin'ny fivarotana mekanika